The iPhone bụ a nganga onwunwe nanị n'ihi na ọ na-eme ka ndụ dịkwuo mfe na ya ọtụtụ atụmatụ na ngwa. Mgbe batrị amalite eme weird, Otú ọ dị, ọ bụ oge ime ihe tupu ọ na-aga kpamkpam nwụrụ anwụ. Ndị mmadụ na ahụmahụ dị iche iche mbipụta na iPhone batrị. Ọ bụ ezi eke n'ihi na otu onye na-atụ anya iPhone batrị-adịru mgbe ebighị ebi; ma dị ka ihe niile dijitalụ akụrụngwa, na iPhone kwesịrị ụfọdụ mmezi. A mfe mmezi, o sina dị, nwere ike idozi nsogbu na-eduga na shortened ndụ batrị.
Ngwa ọdịnala na-tọhapụrụ oge niile, na ọtụtụ ndị na-adọrọ adọrọ iji Ibu Ibu na iPhones. Ụfọdụ igbapu batrị ọzọ karịa ndị ọzọ. Dị ka a n'ozuzu na-achị, ọ dị mma iji zụọ ndị iPhone na-azụ ọnụ ọgụgụ kasị elu ọnọdụ site emecha mfe aga-eme.
Isiokwu a na-ekpuchi 2 akụkụ maka otú iji tọgharịa iPhone batrị na-edebe ya dị mma:
Part 1. Olee otú iji Calibrate iPhone Battery
Part 2. Olee mbo mbuli iPhone ndụ batrị
Rụọ ọrụ iPhone si stupor na a na-ekpo ọkụ reboot. N'okpuru nkịtị ọnọdụ, a ịgụ na-egosi 70% ụgwọ accommodates a 2-3-nkeji video ndekọ na ala, ma a batrị igbapu nwere ike kwụsịtụ ndekọ inikiet inikiet. Ọ dịghị mkpa ka masịrị ya. Batrị dị nnọọ kwesịrị a push. Na teknuzu okwu, ọ chọrọ ka a calibrated maka izi ezi. Usoro dị mfe ike mere anya kwa ọnwa isii ma ọ bụ otú ahụ. Ịmụta na-esonụ mmezi nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Charge iPhone ruo mgbe egosi egosi zuru. Ya na-abaghị uru mode ma hụ na ọ bụghị na-eji n'oge Nchaji usoro (anya maka Apple na akara ngosi na ihuenyo).
Nzọụkwụ 2. The iPhone batrị kwesịrị mmega. Ana ya zuru ike na mgbe ahụ igbapu batrị ruo mgbe ọ na-aga nwụrụ tupu odori ya ọzọ.
Nzọụkwụ 3. Full ikike pụrụ iyi na-etoju na-erughị 100% mgbe ụfọdụ. The iPhone bụ eleghị anya misaligned na a ga-aghọta otú iru mbụ etoju. Igbapu batrị kpamkpam na fanye ya dịkarịa ala ugboro abụọ maka ezi ihe.
Na ọtụtụ atụmatụ dị, iPhone eme rata ndị mmadụ n'ime enyere ha niile. Kasị na-eleghara anya mgbe a mgbe. Ọ bụ omume agbanyụ ọtụtụ atụmatụ iji melite ndụ batrị.
Jiri Vibratory Mode mgbe ọ dị mkpa: họrọ aka Silent mode nanị mgbe ọ dị mkpa. Pịa na Ntọala na Sound; ma ọ bụrụ na vibration na-nyeere, ịgbanwee gaa na anya. The atụmatụ uzo batrị ruo n'ókè ụfọdụ na ọrụ dị mma anya iji ntuziaka mode.
Gbanyụọ enweghị isi eserese: visual mmetụta welie a onye ọrụ ọgaranya iPhone ahụmahụ. Guzosie ike ziri ezi itule site ịpụ nke batrị-agwụ parallax mmetụta na animations. Na-atụgharị parallax anya, pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Accessibility. Kwado Belata Motion on ọrụ. Na-atụgharị animations anya, na-aga Ntọala> na akwụkwọ ahụ aja> ihie. Họrọ a ka foto na-enweghị animated mmetụta. Eserese na-ebu ibu nke ọmụma na iPhone kwesịrị iji rụọ ọrụ ha.
Ibelata ihuenyo ihie: ejide na a na-egbuke egbuke ihuenyo dị na n'ihi na ọ bụ mgbe a ezigbo echiche. Ọ bụ nnukwu batrị drainer. Mgbanwe iji mmadụ mkpa. Pịa na Ntọala> Akwụkwọahụaja & ihie. Họrọ Nchekwa onwe-ihie Off nhọrọ. Mee ìhè aka iru chọrọ nkasi obi etoju.
Na-ahọrọ Manual Downloads: Imelite ngwa ma ọ bụ music otú inwe mmetụta ọjọọ n'ahụ na ndụ batrị. Ụfọdụ na-adịkarịghị eji ma na-na-mmelite. Na-ahọrọ a ntuziaka download mgbe ị kwesịrị ọhụrụ version. A music n'anya nwere ike ịbụ ihe nhọrọ. Pịa na Ntọala> iTunes & App Store. Họrọ Automatic Downloads Off nhọrọ na oge downloads mgbe ọ dị mkpa.
Gbanyụọ Ntọala Dị ka Siri: siri na-arụ ọrụ mgbe onye ọrụ na-akpali ndị iPhone kwupụta ihu. Oge ọ bụla na-eji ngwa na-agba mbọ chepụta ma ọ bụrụ na Siri ga-echigharịkwuru on, batrị drained. A mma nhọrọ bụ pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Siri na-atụgharị na-ewelite-ekwu Okwu apụ. The mode nwere ike mgbe niile-arụ ọrụ site na-ejide Home isi ala. Ọzọkwa, mezie ojiji nke AirDrop, Wi-Fi, na Bluetooth aka.
Họrọ Ndi an-kpọ iPhone égwu: ndabere ngwa ọdịnala na-ụlọ ọrụ mmepụta ihe arụnyere na na na ekwekọghị na onye ntị n'ihi na kacha nta igbapu na batrị. Uche na-ekwesị, dị ka ntụkwasị ngwa ọdịnala na-enwe atụmatụ yiri ngwa ọdịnala ma na-etinye ndị ọzọ ibu na iPhone batrị.
Gbanyụọ Background App Refresh: nwalee iPhone ka ego ma ọ bụrụ na ngwa ọdịnala na-emelite on akpaaka. Pịa na Ntọala> Ozuruọnụ> ojiji ma rịba ama ala Njikere na ojiji ugboro. Kwado ndị na-ehi ụra / Tetanụ mode na-aga azụ ojiji mgbe banyere 10 nkeji. Njikere ga-egosipụta ubara timings. Ọ bụrụ na e nweghị mgbanwe, na villain pụrụ ịbụ ihe ngwa a na-emelite. Laghachi Ntọala> General na pịa Background App Refresh. Igosi a ngwa ngwa ego na wepụ na-achọghị ngwa. Wụnye ha ọzọ mgbe mkpa.
Deactivate ebe Services: enyere iPhone soro ọnọdụ bụ a okomoko ma na ị na-akpụ akpụ n'ime amaghị ókèala. Ọ na-eme igbapu batrị na a na-agbanwe agbanwe ndabere na ghara abụ ezi nhọrọ maka ogologo ndụ batrị. Ego na Ntọala> Nzuzo. Lee maka achọghị ma ọ bụ ejibeghi ngwa n'okpuru ebe Services na-atụgharị ha. Ọzọkwa, nhọrọ dị ka ebe-Dabere iAds na Ugboro ọnọdụ nwere ike nkwarụ n'okpuru System Services.
Na-Mpụga Battery Mgbe Hand: batrị ọhụrụ ngwugwu na-tọhapụrụ mgbe nile n'ime ahịa àjà ọzọ batrị nkwado. Họrọ a dakọtara mkpọ akwadoro maka iPhones. Ọ ga-eji na ndị ọzọ dijitalụ ngwaahịa akpa batrị nkwado. Size bụ mgbe a nsogbu, dị ka otutu emepụta gbagote na oké echiche zobe ngwa.
Get iPad si Iweghachite ọnọdụ
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site iPad
Olee otú Tọgharia iPhone na iTunes / iCloud
CleanMyMac - I Kwesịrị Ịmara
Olee otú ọcha gị Mac
iPhone Ike Tọgharia vs. Soft Tọgharia
Olee otú Tọgharia Network Ntọala na iPhone
Ngwọta na-Tọgharia oziolu paswọọdụ na iPhone (AT & T na Verizon)
Esi ọcha iPhone Ọkà Okwu (iPhone 4)
Asịrị The New iPhone 6: Ụbọchị mwepụta, Pictures, Ahịa, atụmatụ, wdg
Otú nyefee Pọdkastị site na iPhone ka a Computer
> Resource> iPhone> 10 Atụmatụ iji tọgharịa iPhone Battery na-edebe ya dị Ezi Ọnọdụ